Cgbọ oru ngo na-aga ugbu a na Beta: Egwuregwu Egwuregwu GAMEVIL | Gam akporosis
Manuel Ramirez | | esere Royale, Egwuregwu gam akporo
GAMEVIL ebipụtala na Playlọ Ahịa Google Play ndebanye aha mbụ nke Project Cars Go, ragbọ ala gị na-agba ọsọ nzọ anyị nwere ike ịnụrịrịrị ma ọ bụrụ na anyị abanye beta site na ọkpụkpọ oku anyị kesara gị na akwụkwọ a.
Kwuru na nke a egwuregwu bụ karịa nke Arcade nke anyị nwere naanị mkparịta ụka atọ: otu pịa, pịa abụọ na ịgbatị. Atọ ndị a mmekọrịta ma ọ bụ njikwa ga-enyere anyị aka breeki ma ọ bụ mee ngwangwa ma ọ bụ ụzọ ọpụpụ nnọọ ngwa ngwa si agbaru na a arcade ụgbọ ala ọduọ egwuregwu. Gaa maka ya.
1 Gbalịa Project Cars Go beta ugbu a
2 Gbaa ịnyịnya kacha mma na ụwa na Project Cars Go
3 Ọ bụrụ na ị naghị enye ịme anwansị, nye ọdịnaya
Gbalịa Project Cars Go beta ugbu a
Na mbụ anyị na-aga inye ohere ka beta nke Project Cars Go:
Njikọ na Google Play beta: Cgbọ ala Project Go
Ugbu a naanị ị ga-echere maka egwuregwu ngwa ahịa peeji nke ịgafe ndebanye tupu echichi nke beta. Ọ ga-abụ ihe gbasara nkeji ma ọ bụ ịpịrị nhọrọ nbudata mgbe ọ dị ma yabụ ị natara ọkwa na-egosi na ị wụnye ya.
Project Cars Go malitere, anyị ghọtara ngwa ngwa na anyị bụ ihe mbụ bụ freemium nke na-ewepụ akụkụ nke kacha mma nke egwuregwu ahụ maka nyiwe ndị ọzọ, yana nke ọ bụ simulator ịnya ụgbọ ala, ịga n'ihu usoro egwuregwu nke anyị nwere naanị bọtịnụ atọ ma ọ bụ omume.
Otu ga-abụ maka na-amalite site na grid, bọtịnụ ọzọ iji mee ngwa ngwa na arches na-acha anụnụ anụnụ, na ndị na-acha uhie uhie ịpị ogologo oge ruo mgbe anyị gafere site na arc green ma hapụ. Nke a bụ ụzọ nke ịnya ụgbọ ala Project Cars Go; ee ntakịrị oyi.
Gbaa ịnyịnya kacha mma na ụwa na Project Cars Go
Ee, ọ bụ eziokwu na ọ dị na ọdịnaya ebe egwuregwu egwuregwu a akpọrọ Project Cars Go nwere ike ịba uru nakwa na ọ nwere ike iburu anyị na sekit gburugburu ụwa. dị ka ndị dị na Las Vegas, Long Beach, Singapore.
Dị ka o nwere ọtụtụ nchịkọta ụgbọ ala egwuregwu na ndị na-adịghị si niile ụdị dị ka Ford, Mercedes, na nke ahụ bụ ihe ọzọ nke ya ihe na-uru na-enwe gị Arcade ahụmahụ izu.
Ma ọ bụ na anyị ga-enwe n'aka anyị ohere ịme ụgbọ ala ihe atụ oge niile dịka ọ na-eme egwuregwu mbụ na Ford Mustang Fastback.
Ọ bụrụ na ị naghị enye ịme anwansị, nye ọdịnaya
Ma na nka bu ihe kachasi nma Cgbọ ala Gogbọ ala na-aga site na ịhapụ anyị na pulsations ndị ahụ, ọ bụ ezie na ọ na-enye ohere ịmịpụta mma na eserese nwere ahụmịhe ọhụụ dị mkpa karịa. Ihe anyị nwere ike ịnweta ntakịrị bụ eziokwu na anyị na-eche ụgbọ ala ndị ọzọ ihu ma nke anyị gafere na-enweghị imetụ ha aka n'emeghị ihe ọ bụla.
Anya bụ ebe ọ na-ejide dị ka ya na nkọwa zuru ezu nke ụgbọ ala ndị ahụ nke ụdị dị iche iche. Ihe dị na ya bụ ịme anwansị ahụ bụ na ọ bụghị, naanị na anyị ga-akpachara anya ka ị pịa oge kwesịrị ekwesị iji mee ngwangwa ngwa ngwa o kwere omume na Cars Go. N’ebe ahụ ka anyị nọrọ.
Project Cars Go dị na beta na olile anya na ọ ga-aga n'ihu na-akawanye mma, ọ bụ ezie na maka oge anyị were ya dị ezigbo mma. Ọ bụrụ na ị bụ onye ofufe nke ụgbọ ala ụdị na ị na-achọ a kapịrị ọnụ, ọ bụ egwuregwu ga-enye gị ihe niile ị na-achọ; ee, ọ bụrụ na ị na-achọ ịme anwansị, gaa na GRID autosport maka ihe ezigbo.
Ọ na-apụta maka ọdịnaya, eserese na ụgbọ ala ụdị ị nwere ike imeghe. Ọ bụghị a simulator, kama ihe eji eme ihe.
Usoro edemede: 6
Thedị na ụgbọ ala ndị ahụ
Nhazi nke sekit na eserese maka ezigbo ahụmịhe ọhụụ
Anyị anaghị anya ụgbọala
Cgbọ ala ụgbọala na-aga
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » esere Royale » Cgbọ ala Project Go dị ugbu a na beta: egwuregwu ịgba ọsọ nke GAMEVIL